Mpamatsy marobe mpividy mpamatsy volo otrikaina mpividy mora vidy maro | YiZheng
ny Fitaovana fanangonana zezika mandeha ho azy amin'ny ankapobeny dia mandray ny refy elektronika ho fitaovana fandrefesana. Ny motera lehibe dia miaraka amin'ny fitaovana azo ovaina PID sy ny fiasan'ny fanairana. Ny hopper tsirairay dia voafehy mitokana.
Inona ilay masinina manangona zezika mandeha ho azy?
Fitaovana fanangonana zezika mandeha ho azy Ampiasaina indrindra amin'ny fandanjana sy ny fanaovana doka marina miaraka amina akora betsaka ao anaty tsipika famokarana zezika mitohy mba hifehezana ny habetsahan'ny sakafo sy hiantohana ny famolavolana marina.
Ampiasaina ny masinina manangona zezika mandeha ho azy?
Fitaovana fanangonana zezika mandeha ho azy dia mety amin'ny famonoana mitohy, toy ny akora zezika ao amin'ny toerana fanaovana zezika. Ireo tranokala ireo dia mitaky fitohizan'ny fametahana ambony kokoa, amin'ny ankapobeny dia tsy mamela ny fisian'ny fijanonana eo anelanelan'ny famaranana, henjana kokoa ny tahan'ny fitakiana fitaovana isan-karazany. ny Masinina fanangonana zezika mandeha ho azy dia be mpampiasa amin'ny simenitra, simika, metallurgical ary indostria hafa
Ny tombony amin'ny milina fametahana zezika mandeha ho azy
1) Mety amin'ny akora 4 ka hatramin'ny 6
2) Ny hopper tsirairay dia azo fehezina tsy miankina sy marina
3) Fametrahana mazava tsara ≤ ± 0,5%, fametahana packaging ± 0,2%
4) Ny raikipohy dia azo ovaina amin'ny fotoana rehetra arakaraka ny filan'ny mpamokatra
5) Amin'ny alàlan'ny fanontana tatitra, ny tatitra dia azo atao pirinty amin'ny fotoana rehetra
6) Miaraka amin'ny LAN na ny rafitra fanaraha-maso lavitra, azo ampifandraisina amin'ny efijery hanehoana ireo akora ankehitriny.
7) Fonenana faritra kely (ambanin'ny tany, semi-ambanin'ny tany, ambanin'ny tany), fanjifana angovo ambany, fandidiana tsotra.
Fampisehoana horonantsary mikiraoba otrikaretina mandeha ho azy
Safidy maodely voafantina ho an'ny zezika mandeha ho azy
Tombany lanja farany ambony
4 × 5,5kw
Teo aloha: Elevator amin'ny siny
Manaraka: Separator fisarahana ranoka matevina
Fampidirana Inona ny masinina mitondra sy manome sakafo? Fampiasana ny milina famoahana & famahanana ho toy ny trano fitehirizana akora eo am-panaovana ny famokarana sy fanodinana zezika. Izy io koa dia karazana fampitaovana fampitaovana ho an'ny akora lehibe. Ity fitaovana ity dia tsy afaka mampita fitaovana tsara misy haben'ny sombiny latsaky ny 5mm, fa koa ireo fitaovana marobe ...